အခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုပယ်ချထားခဲ့တဲ့ မော်ရင်ဟိုတယောက်ဘာနေဗျူးကိုပြန်လာချင်နေတာလား ? - SPORTS MYANMAR
အခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုပယ်ချထားခဲ့တဲ့ မော်ရင်ဟိုတယောက်ဘာနေဗျူးကိုပြန်လာချင်နေတာလား ?
လတ်တလောထွက်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းတွေအရပေါ်တူဂီ နာမည်ကျော် နည်းပြကြီး မော်ရင်ဟို တယောက် ဘာနေဗျူးကို ပြန်လာချင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။မော်ရင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာ ယူနိုက်တက် အသင်း ကနေ ထုတ်ပယ် ခံလိုက်ရအပြီးကတည်းက နည်းပြလောကအတွင်းကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခြင်း မရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
အသင်းလက်မဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ကို အလိုရှိနေတဲ့ ဥရောပ ထိပ်တန်း အသင်း တွေ က အများအပြားရှိနေတာဖြစ်ပြီးမိုနာကို၊လိုင်လီ၊ ဝုလ်ဘတ်၊ ရှော်လ်ကေး၊ အေစီမီလန် အသင်းတွေကို ကိုင်တွယ်ခွင့်ရမယ့်အခွင့်အရေးတွေရခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူကပယ်ချထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရီးရဲလ်အသင်းကိုပြန်လာချင်နေပုံရနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလကနေ အခုစက်တင်ဘာလအတွင်း မှာမော်ရင်နဲ့အံကိုက်ဖြစ်လောက်မယ့်အသင်းတွေအဖြစ် PSG ၊ ဂျူဗီ နဲ့ ဘိုင်ယန် မြူးနစ်တို့နဲ့ သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။။မော်ရင်ဟိုဟာမကြာသေးမီကမှဂျာမန် ဘာသာစကားကို လေ့လာသင့်ယူထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး စပါးအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ချင်တဲ့အကြောင်းကိုအခုနှစ်အစောပိုင်းမှာဖွင့်ဟထားခဲ့ဖူးတာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုစဉ်က ရီးရဲလ်အသင်းဟာ နည်းပြ ဆိုလာရီကို ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ပြီး နည်းပြသစ်ရှာဖွေ နေချိန် မှာ ပိုချက်တီနို နဲ့ သတင်းတွေ အတော်လေးထွက်ပေါ်ခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်ရီးရဲလ်အသင်းဟာနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ရဲ့ နည်းပြဟောင်း ဇီဒန်းကို ပြန်ခေါ်ခဲ့လို့ ပုံပြင်တွေအဆုံးသတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
PSG နဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် တို့ကတော့ သူတို့ရဲ့ နည်းပြတွေဖြစ်တဲ့ တူချယ်နဲ့ ကိုဗက်စ်တို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အားရကျေနပ်မှု မရှိသလို အတက်အကျတွေ တရာသီလုံးကြုံတွေ့ထားခဲ့ လို့မော်ရင်ဟိုကို အလိုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ လေသံမျိုးထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ၂သင်းလုံးဟာ အဆိုပါနည်းပြ ၂ယောက်နဲ့ ပဲ ရာသီသစ်ကိုခရီးဆက်ဖို့ ဆုံဖြတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဂျူဗီ အသင်းကလည်းအယ်လီဂရီရဲ့ နေရာမှာ ချဲဆီးလ် နည်းပြဟောင်း ဆာရီကို ပဲ တာဝန်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း လက်ရှိအချိန်မှာတော့ မော်ရင်ဟိုဟာ ရီးရဲလ်အသင်းနည်းပြ နေရာကို စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ သတင်းတွေကဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရီးရဲလ် အသင်းဟာ လာလီဂါ အမှတ်ပေးဇယားကို ဦးဆောင်နေပေမယ့် ခြေစွမ်းနဲ့ရလဒ်ပိုင်း တည်ငြိမ်မှုမရသေးသလိုချန်ပီယံလိဂ်အဖွင့်ပွဲမှာလည်း PSG အသင်းကို ၃-၀ ဂိုးနဲ့ အရှက်တကွဲ အရေးနိမ့်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တကျော့ပြန် နည်းပြဇီဒန်းရဲ့ ဘာနေဗျူး ခရီးစဉ်ဟာ ပန်းခင်းလမ်း ဖြစ်မနေပဲ ဖိအားတွေရှိနေပြီး ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေကို ခံထားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် လည်း အသင်းကို ချန်ပီယံလိဂ် ၃နှစ်ဆက်ရယူပေးခဲ့တဲ့ ဒီပြင်သစ်သားကြီးကို ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေက စိတ်ပျက်မှု တစုံတရာပြသထားခြင်းတော့ မရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ရီးရဲလ်အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီကုန်မှာ ဇီဒန်း နုတ်ထွက်သွားခဲ့လို့ လိုပက်တီဂီ၊ ဆိုလာရီတို့ကို အစားထိုးခဲ့ပေမယ့် အလုပ်မဖြစ်ခဲ့လို့ ဇီဒန်းကိုပဲ ပြန်ခေါ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အချိန်သိပ်မရခဲ့တာကြောင့်လည်း ဖလားလက်မဲ့ရာသီတခုကိုပဲကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဆိုပါအနေအနေဆိုးတွေကို ထပ်မကြုံရစေဖို့ နွေရာသီဈေးကွက် အတွင်းမှာယူရိုသန်း၃၀၀ ကျော်အသုံးပြုပြီးအသင်းကိုအင်အားဖြည့်တင်းထားပြီးပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာ ယနေ့ ညမှာတော့ လာလီဂါ ပွဲစဉ်အဖြစ် အေတီနဲ့ မက်ဒရစ်ဒါဘီပွဲကိုဆင်နွှဲရမှာဖြစ်ပြီး ကြားရက်မှာတော့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲအဖြစ်ဘရုဂေးအသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခှငျ့အရေးကောငျးတှကေိုပယျခထြားခဲ့တဲ့ မျောရငျဟိုတယောကျဘာနဗြေူးကိုပွနျလာခငျြနတောလား ?
လတျတလောထှကျပျေါနတေဲ့ သတငျးတှအေရပျေါတူဂီ နာမညျကြျော နညျးပွကွီး မျောရငျဟို တယောကျ ဘာနဗြေူးကို ပွနျလာခငျြနတေယျလို့ သိရပါတယျ။မျောရငျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈ ဒီဇငျဘာလအတှငျးမှာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ကနေ ထုတျပယျ ခံလိုကျရအပွီးကတညျးက နညျးပွလောကအတှငျးကို ပွနျလညျဝငျရောကျလာခွငျး မရှိသေးတာဖွဈပါတယျ။
အသငျးလကျမဲ့ ဖွဈနတေဲ့ သူ့ကို အလိုရှိနတေဲ့ ဥရောပ ထိပျတနျး အသငျး တှေ က အမြားအပွားရှိနတောဖွဈပွီးမိုနာကို၊လိုငျလီ၊ ဝုလျဘတျ၊ ရှျောလျကေး၊ အစေီမီလနျ အသငျးတှကေို ကိုငျတှယျခှငျ့ရမယျ့အခှငျ့အရေးတှရေခဲ့သေးတာဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့ သူကပယျခထြားခဲ့တာဖွဈပွီး ရီးရဲလျအသငျးကိုပွနျလာခငျြနပေုံရနတောဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ မလေကနေ အခုစကျတငျဘာလအတှငျး မှာမျောရငျနဲ့အံကိုကျဖွဈလောကျမယျ့အသငျးတှအေဖွဈ PSG ၊ ဂြူဗီ နဲ့ ဘိုငျယနျ မွူးနဈတို့နဲ့ သတငျးတှလေညျးထှကျပျေါခဲ့သေးတာဖွဈပါတယျ။။မျောရငျဟိုဟာမကွာသေးမီကမှဂြာမနျ ဘာသာစကားကို လလေ့ာသငျ့ယူထားခဲ့တာဖွဈပွီး စပါးအသငျးကိုပွောငျးရှခေ့ငျြတဲ့အကွောငျးကိုအခုနှဈအစောပိုငျးမှာဖှငျ့ဟထားခဲ့ဖူးတာဖွဈပါတယျ။
ထိုစဉျက ရီးရဲလျအသငျးဟာ နညျးပွ ဆိုလာရီကို ရာထူးကနေ ထုတျပယျပွီး နညျးပွသဈရှာဖှေ နခြေိနျ မှာ ပိုခကျြတီနို နဲ့ သတငျးတှေ အတျောလေးထှကျပျေါခဲ့သေးတာဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့ရီးရဲလျအသငျးဟာနောကျဆုံးမှာတော့သူတို့ရဲ့ နညျးပွဟောငျး ဇီဒနျးကို ပွနျချေါခဲ့လို့ ပုံပွငျတှအေဆုံးသတျသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
PSG နဲ့ ဘိုငျယနျမွူးနဈ တို့ကတော့ သူတို့ရဲ့ နညျးပွတှဖွေဈတဲ့ တူခယျြနဲ့ ကိုဗကျဈတို့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျအပျေါ အားရကနြေပျမှု မရှိသလို အတကျအကတြှေ တရာသီလုံးကွုံတှထေ့ားခဲ့ လို့
မျောရငျဟိုကို အလိုရှိနတေယျဆိုတဲ့ လသေံမြိုးထှကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီ၂သငျးလုံးဟာ အဆိုပါနညျးပွ ၂ယောကျနဲ့ ပဲ ရာသီသဈကိုခရီးဆကျဖို့ ဆုံဖွတျထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဒါ့အပွငျ ဂြူဗီ အသငျးကလညျးအယျလီဂရီရဲ့ နရောမှာ ခြဲဆီးလျ နညျးပွဟောငျး ဆာရီကို ပဲ တာဝနျပေးထားခဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး လကျရှိအခြိနျမှာတော့ မျောရငျဟိုဟာ ရီးရဲလျအသငျးနညျးပွ နရောကို စိတျဝငျစားနတေယျလို့ သတငျးတှကေဖျောပွလာတာဖွဈပါတယျ။ရီးရဲလျ အသငျးဟာ လာလီဂါ အမှတျပေးဇယားကို ဦးဆောငျနပေမေယျ့ ခွစှေမျးနဲ့ရလဒျပိုငျး တညျငွိမျမှုမရသေးသလိုခနျြပီယံလိဂျအဖှငျ့ပှဲမှာလညျး PSG အသငျးကို ၃-၀ ဂိုးနဲ့ အရှကျတကှဲ အရေးနိမျ့ထားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ တကြော့ပွနျ နညျးပွဇီဒနျးရဲ့ ဘာနဗြေူး ခရီးစဉျဟာ ပနျးခငျးလမျး ဖွဈမနပေဲ ဖိအားတှရှေိနပွေီး ဝဖေနျပွဈတငျမှုတှကေို ခံထားခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့ လညျး အသငျးကို ခနျြပီယံလိဂျ ၃နှဈဆကျရယူပေးခဲ့တဲ့ ဒီပွငျသဈသားကွီးကို ဘုတျအဖှဲ့ဝငျတှကေ စိတျပကျြမှု တစုံတရာပွသထားခွငျးတော့ မရှိသေးတာဖွဈပါတယျ။
ရီးရဲလျအသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီကုနျမှာ ဇီဒနျး နုတျထှကျသှားခဲ့လို့ လိုပကျတီဂီ၊ ဆိုလာရီတို့ကို အစားထိုးခဲ့ပမေယျ့ အလုပျမဖွဈခဲ့လို့ ဇီဒနျးကိုပဲ ပွနျချေါခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့ အခြိနျသိပျမရခဲ့တာကွောငျ့လညျး ဖလားလကျမဲ့ရာသီတခုကိုပဲကွုံတှဖွေ့တျသနျးလိုကျရတာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အဆိုပါအနအေနဆေိုးတှကေို ထပျမကွုံရစဖေို့ နှရောသီစြေးကှကျ အတှငျးမှာယူရိုသနျး၃၀၀ ကြျောအသုံးပွုပွီးအသငျးကိုအငျအားဖွညျ့တငျးထားပွီးပွီလညျးဖွဈပါတယျ။သူတို့ဟာ ယနေ့ ညမှာတော့ လာလီဂါ ပှဲစဉျအဖွဈ အတေီနဲ့ မကျဒရဈဒါဘီပှဲကိုဆငျနှဲရမှာဖွဈပွီး ကွားရကျမှာတော့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲအဖွဈဘရုဂေးအသငျးနဲ့ ရငျဆိုငျသှားရမှာဖွဈပါတယျ။